INER GROUP CO., LIMITED Izimboni Zezimboni Umkhiqizi Nomhlinzeki
"Ifektri yokunciphisa izimoto eGear, Umkhiqizi Wezimoto we-AC &DC,
Umhlinzeki Wemikhiqizo Yezimoto Yezimboni, iChina ilungiselele imoto kagesi. "
I-NER GROUP yindlunkulu etholakala eChina eyakhiwa kusukela ngonyaka we-30 eyedlule kanti uYantai Bonway Manufacturer Co, Ltd yinkampani egatsheni eChina mainland okuyibhizinisi lobuchwepheshe eliphakeme elizinikele embonini eqhutshwa ngamandla kagesi ikakhulukazi eyama-gearmotors, izimboni zegiya nama-motor kagesi. Ngohlelo oluhle kakhulu lokuthengisa ngemuva kokuthengisa, sakha umkhawulo webhizinisi lamagama amaningi wamaphrojekthi wobunjiniyela emazweni amaningi, okwakungokwaseYurophu, Middle East kanye naseNingizimu Melika.
ngomqondo ophakeme futhi oqinile wokuziphatha okuhle, kepha njengenkampani eyakha ubudlelwane bokuthembana nababambiqhaza futhi idale iminikelo ebanzi emphakathini ngokunikeza ubuchwepheshe obukhulu kanye nezinsizakalo eminyakeni elandelayo ye-100.
Sithuthukisa uchungechunge olujwayelekile, uchungechunge olukhethekile, uchungechunge olukhulu nolungejwayelekile oluphakathi naphakathi, uchungechunge olusha, uchungechunge olunemba lokudluliswa okuphezulu kanye nochungechunge olungaphezulu kwamashumi ezinkulungwane zezinhlobo zokushayela kwamandla.
Ngawo wonke amandla wezobuchwepheshe afaka i-R & D, ukuklama, ukukhiqiza kanye nokuhlola okuthuthukile, singakwazi ukukhiqiza okuphelele kwamadrayivu embonini anezinhlobo ezingaphezu kwezilishumi eziyishumi nezinhlobo eziyikhulu.
Sine-stock stock enkulu ukuqinisekisa ukulethwa okusheshayo Ngokuya ngesisombululo senkambu yomkhakha wobuchwepheshe, impumelelo enhle kakhulu yezimboni kanye nesicelo sobuchwepheshe obuholayo.
Uma unemibuzo mayelana nenkampani yethu, sicela uthole ikhasi le-FAQ futhi zonke izimpendulo zikhona. Ujabulele usuku lwakho.
Yonke ikhathalogi oyifunayo ilapha bese uqhafaza funda kabanzi ukuze uhlole amakhathalogi ethu manje.
I-Geared motor catalog, ikhathalogi yamagiya we-nmrv, izigcawu zamandla wekhathalogi ye-pdf, i-bonfiglioli eyenzelwe ikhathalogi yezimoto pdf, i-siemens gearbox ikhathalogi, isemens catalogue geared, imidwebo ye-gearbox ye-fleem, ikhathalogi yesemigwaqo ye-geemar, abasabalalisi begiya le-motor yesemens.
IGear motor Electric supply gear kupunguza gearbox kagesi motor spur gear kagesi iplanethi ye-helical gear electromotor services kagesi izinhlobo zama-motor.